Njengoko amaxabiso entsimbi eqhubeka nokunyuka, isalathiso sentsimbi esenziwe ngenyanga (MMI) sentsimbi ekrwada sonyuke nge-7.8% kule nyanga. Ngaba ukulungele uthethathethwano lwesivumelwano sentsimbi sonyaka? Qiniseka ukuba uphonononge iindlela zethu ezintlanu ezilungileyo. Njengoko besibhalile kwikholamu yale nyanga, amaxabiso entsimbi ebekhula ngokuqhubekekayo ukusukela kwisumme yokugqibela ...
NgolwesiHlanu, ikamva le-ore yentsimbi liye lakhula kwiveki yesihlanu ilandelelana. Imveliso yentsimbi echasene nongcoliseko eTshayina, oyena mvelisi uphambili, yawa, kunye nokufunwa kwentsimbi kwihlabathi liphela, ukunyusa amaxabiso entsimbi ukurekhoda phezulu. NgoSeptemba ngentsimbi yentsimbi kwikamva le-Dalian Commodity Exchange yase China ivaliwe u ...
UKUQHUBA IINDABA: I-China ithathe isigqibo sokususa isaphulelo kwiimveliso zentsimbi
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Epreli, i-Ofisi yoMphathiswa Wezimali yakhupha isibhengezo malunga nokucinywa kwesaphulelo kwirhafu yokuthumela ngaphandle kwezinye iimveliso zentsimbi. Ukusukela nge-1 kaMeyi ka-2021, izaphulelo zerhafu yokuthumela kwelinye ilizwe kwezinye iimveliso zentsimbi ziya kurhoxiswa. Ixesha elithile lokuphunyezwa liya kuchazwa ngumhla wokuthumela ngaphandle ...
Ngaba "iziseko zophuhliso" zinokuqhuba ngokuthe ngqo ukunyuka kweemfuno zentsimbi?
ngomphathi ku 20-03-13
Kukho ukuvumelana okungakumbi ngoku ukuba urhulumente kufuneka agxile "kwiziseko zophuhliso ezintsha" emva kwesifo. "Iziseko zophuhliso ezintsha" ziba yinto entsha ekugxilwe kuyo yokubuyiselwa koqoqosho lwasekhaya. "Iziseko zophuhliso ezintsha" zibandakanya iindawo ezisixhenxe eziphambili kubandakanya ...